သူမစိတ်တိုင်းကျ – Grab Love Story
ဖယ်တော့ . ဇော်သူ . နင် သိပ်အတင်းရဲတာပဲ . မောင် သိသွားရင် . ငါတို့အိမ်ထောင်ရေး ပျက်စီးမှာဟ “ ” ပြီးတော့မှပါ . ရှီးးးးးးးး .. ဘွတ်ဘွတ် .. အားဟား .. အင့် .. ကိုရဲခိုင် အပေါ်မှာ သောက်နေတာပါ . မပူနဲ့ မမဝတီ . အင့် အင့် “ နွယ်ဝတီ တစ်ယောက် ၄ထပ်တိုက် အစိမ်းကြီး၏ အောက်ဆုံးထပ် ကားဂိုဒေါင်ထဲ နံရံ ကပ်ကာ မျက်နှာချင်းဆိုင် မတ်တပ်ရပ်အနေထားဖြင့် ဇော်သူ၏အလိုး ခံနေရသည်။ဇော်သူမှာ နွယ်ဝတီ၏ လက်နှစ်ဖက်အား ချုပ်ပြီးနံရံကပ်ကာ စကပ်ထမိန်အား ပေါင်ရင်းထိလှန်ရင်း ပေါင်ကြားတည့်တည့်မှ စောက်ဖုတ်အား ပစ်ပစ်လိုးနေတော့၏။နွယ်ဝတီမှာ အသက်၃၂နှစ်ခန့်ရှိပြီး ရဲခိုင်နှင့် အိမ်ထောင်ကျကာ အိမ်ထောင်သက် ၄နှစ်အတွင်း အပြင်သိပ်မထွက်ပေ အိမ်ထဲနေတာများသည်။တခါတလေ လင်ဖြစ်သူရဲခိုင်မှ ပါတီပွဲ ဒင်နာပွဲများ ခေါ်ကာ မိန်းမဖြစ်သူအား ထုတ်ကြွားသည့်အခါများတွင် နွယ်ဝတီတစ်ယောက် အပြင်ပါလာခဲ့၏။ အရပ်မနိမ့်မမြင့် မျက်နှာသွယ်သွယ် ထူကဲသောမျက်ခုံး နှာတံပေါ်ပေါ် နူတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးနှင့် နွယ်ဝတီ၏ တစ်ယောက် ရယ်လိုက်တိုင်း လူတိုင်း ငေးမောသွားရသည်။
အထူးသဖြင့် ပုခုံးကျယ်ကျယ်နှင့် စူထွက်နေသော နိူ့အုံနှစ်ဖက် . သေးကျဉ်သော ခါးလေးအောက် ကော့ထွက်ဝိုင်းစက်နေသော ဖင်ကြီးမှာ မြင်သည့်ယောင်္ကျားတိုင်း လည်ပြန်ငေးကြည့်တတ်၏။ နွယ်ဝတီမှာ ယောင်္ကျားတိုင်း မရောတတ်ပေမယ့် သူမအိမ်ဝင်ထွက်နေသော ဇော်သူ့အား မောင်ငယ်တစ်ယောက်လို ခင်မင်ခဲ့သည်။ဇော်သူ့ရည်းစားရှိသည်ဟု ခင်ပွန်းသည်ထံမှ ကြားသိထားသော်လည်း ခုထိ မမြင်ဖူးသေးပေ။ ဇော်သူမှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ရဲခိုင်၏ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် ဦးမင်းသူ၏တစ်ဦးတည်းသောသားဖြစ်သည်။အသက် ၂၃ခန့် ကျောင်းပြီး၍ လုပ်ငန်းခွင်ထဲ လေ့လာနေသူဖြစ်၏။ရဲခိုင် ကိုလည်း အကိုတစ်ယောက်လို သဘောထားကာ ခင်မင်နေသူဖြစ်သည်။အိမ်တွင်းအောင်းနေတတ်သော နွယ်ဝတီမှာ ယောင်္ကျားဆိုလို့ လင်ဖြစ်သူရဲခိုင်နှင့် ဇော်သူတို့ နှစ်ဦးကိုသာ အနီးကပ်နေထိုင်ခဲ့၏။ခုလည်း ဇော်သူ၏ အတင်းကြိုးစားမှု့ကြောင့် မဖြစ်သင့်တာ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
လင်ဖြစ်သူရဲခိုင်၏ ဆက်ဆံမှု့နှင့် မတူသော ဇော်သူ၏ ခပ်ကြမ်းကြမ်း လိုးချက်များအား မသိမသာ နှစ်ချိုက်သွားမိတော့၏။ဇော်သူ အိမ်ပေါ်ပြန်တက်သွားချိန် နွယ်ဝတီလည်း သူမတို့ကားလေးပေါ် တက်ကာ မှေးနေတော့၏။ ” ကျွီ . ဟော . မောင့် မိန်းမ . ပင်ပန်းပြီ ထင်တယ် “ ” ရပါတယ် . မောင်ရယ် “ ” ကိုမင်းသူက . သူ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးနေလို့ကွ . ဆောက်လုပ်ရေး ဘက်က ဆိုတော့ အသိမိတ်ဆွေ တိုးတာ ကောင်းပါတယ် “ ရဲခိုင်မှာ မိန်းမဖြစ်သူ နွယ်ဝတီအား ရှင်းပြရင်း ခြံကြီးထဲမှ ကားလေးအား မောင်းထွက်လိုက်သည်။ခြံပြင်ရောက်မှ ကျောက်လမ်းပေါ်မေးတင်ကာ အိမ်ပြန်ရန် ဦးတည်လိုက်တော့၏။ရဲခိုင်က အသက် ၃၅နှစ်ထဲ ရောက်ကာ နွယ်ဝတီထက် ၃နှစ်ကြီးသည်။ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ တခုထောင်ကာ အလုပ်ကို တစိုက်မတ်မတ် ကြိုးစားခဲ့သဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း အောင်မြင်လာခဲ့၏။ရဲခိုင်အား မြေတောင်မြှောက်ပေးသော သူတွေထဲတွင် ဇော်သူ၏ ဖခင် ဦးမျိုးသူက ထိပ်ဆုံးက ပါဝင်သည်။ ရဲခိုင် အောင်မြင်လာချိန်တွင် ဦးမျိုးသူက သားဖြစ်သူ ဇော်သူအား ရဲခိုင်ထံ ပြန်လည်လေ့လာ သင်ကြားခိုင်းသည်။
ဇော်သူကလည်း မခေပေ လုပ်ငန်းခွင်ရောက်တာ မကြာသေးပေမယ့် ရဲခိုင်နှင့် ပရောဂျက်အသစ်တခု ရေးဆွဲကာ မြို့သစ်တခုတွင် မြေကွက် လေလံဆွဲကာ အဆောက်အဦးများ ဆောက်ရန်ကြိုးစားနေ၏။ရဲခိုင်မှာ ဇနီးဖြစ်သူ နွယ်ဝတီအား ဇော်သူ့အကြောင်းပြောပြနေစဉ် နွယ်ဝတီတစ်ယောက် ခြေဖျားလက်ဖျားများ အေးစက်လာတော့သည်။ရဲခိုင်အိမ်ပေါ် မိတ်ဆွေများနှင့် စားသောက်နေချိန် နွယ်ဝတီတစ်ယောက် အိမ်အောက်ထပ် ကားဂိုဒေါင်ထဲ ဇော်သူ၏မီးပွင့်မတတ် လိုးချက်များ ခံလိုက်ရသည်။ခုလည်း လင်ဖြစ်သူ ရဲခိုင်မှာ ဇော်သူ့အကြောင်းပြောရာ ပူပူနွေးနွေး အလိုးခံထားရသော အဖုတ်လေးထဲမှ တဆစ်ဆစ်နှင့် ခံစားလာရ၏။
အိမ်ရောက်သည်နှင့် ရဲခိုင်မှာ စားသောက်လာသည့်အရှိန်ဖြင့် အဝတ်စားပင်မလဲနိုင် အိပ်ပျော်သွားတော့သည်။နွယ်ဝတီမှာ ဇော်သူနှင့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်များကို ပြန်လည်တွေးရင်း အိပ်မပျော်နိုင်သေးပေ။လင်တော်မောင်နှင့်ပက်သက်ပြီး အိမ်အဝင်ထွက်များလာသော ဇော်သူမှာ စသိကတည်းက သူမခန္ဓာကိုယ်အား ခိုးခိုးကြည့်တတ်၏။ရင်းနှီးလာသည့်နောက်ပိုင်းတွင် လင်ဖြစ်သူရဲခိုင်ရှေ့၌သာ ရိုးရိုးသားသားဆက်ဆံပေမယ့် ရဲခိုင်မရှိလျင် သူမကိုယ်လုံးအား ဟိုပုတ်ဒီပုတ်ဖြင့် ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်သည်။နွယ်ဝတီမှာ အနေအေးသူမို့ မသိချင်ယောင်ဆောင်ကာ ပါသည့်ပါသာ နေလာခဲ့၏။ လင်ဖြစ်သူရဲခိုင်အား ဇော်သူ့အကြောင်း ရိပ်ဖန်းသံဖမ်း ပြောပြရာ ရဲခိုင်မှာ သဝန်မတိုသည့်အပြင် ဇနီးချောလေး၏ အလှတရားအတွက် ဂုဏ်ယူနေသည်။
ရဲခိုင်မှာ အမှန်တကယ်လည်း လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက် မိတ်ဆွေများကြား သူ့ဇနီးချောလေး၏ ခန္ဓာကိုယ်အလှအား ဝေဖန်လျင် ဂုဏ်ယူကာ ဘဝင်ခိုက်နေသော သူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော ၆လခန့်တွင် မမျော်လင့်သော အဖြစ်ပျက်လေးများ စတင်ရာမှာ နွယ်ဝတီ၏ ကာမမီးတောက်လေး တောက်လောင် လာခဲ့ရ၏။အိ်မ်အပေါ်ထပ် လင်တော်မောင် အလုပ်ခန်းအား ရှင်းလင်းရာမှ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ နွယ်ဝတီနှင့်ဇော်သူမှာ ရဲခိုင်၏ အလုပ်ခန်းအားရှင်းရာ နှစ်ယောက်သား ချွေးများ ဖုန်မှုံ့များကပ်ကာ ညစ်ပတ်နေ၏။ဇော်သူမှာ စွပ်ကျယ်နှင့်ပုဆိုးတိုတို ဝတ်ကာ အခန်းရှင်းရင်း ကြမ်းပြင်ပေါ် ထိုင်ကာ ခဏအမောဖြေနေရင်း ခုံပုလေးပေါ်တက်ကာ ကြက်မွှေးတစ်ချောင်းဖြင့် မှန်ဗီဒိုအား သုတ်နေသော နွယ်ဝတီ၏ ဖင်ကြီးအား စိုက်ကြည့်နေသည်။နွယ်ဝတီမှာလည်း ဖုန်သုတ်ရင်း သူမနောက်ပိုင်းအား ဇော်သူကြည့်နေသည်ကို မျက်လုံးဒေါင့်မှ မြင်နေရာ စိတ်မလုံပြီး ခုံပုလေးပေါ်မှ ဆင်းကာ ကြမ်းပြင်ပေါ်ဆင်းထိုင်ရင်း ဗီဒိုအား ကျော်မှီထားလိုက်၏။ သူမထိုင်လိုက်သည်နှင့် ဇော်သူမှာ ထလာပြီးသူမရှေ့တည့်တည့် လာထိုင်နေသည်။
” ခိခိ “ ” အမ် . ဘာရီတာလဲ ဇော်သူ “ ” မမဝတီရဲ့ . မျက်နှာမှာ ဖုန့်တွေနဲ့ဗျ . ခိခိ “ ” အံမယ် . မင်းမျက်နှာလည်း ကြောင်ချေးအိုးပဲ “ ဇော်သူ့ရယ်သံကြောင့် နွယ်ဝတီမှာ ဇော်သူမျက်နှာအား ကြည့်ရင်း ပြန်လည်ပြောဆိုလိုက်သည်။ဇော်သူ့မျက်နာအားကြည့်ရင်း အမှတ်မထင် ဇော်သူပေါင်ကြားထဲ အကြည့်ရောက်ကာ မျက်နှာလေး ရဲတက်လာ၏။ပုဆိုးတိုတိုဝတ်ကာ ညာဘက်ခြေထောက်ကွေးပြီး ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ဒူးထောင်ရင်း လက်နှစ်ဖက်နောက်ပစ်ထောက်ထားသည်မို့ ဇော်သူ့ပေါင်ကြားမှ လီးကြီးအား မြင်နေရသည်။ပထမဆုံး အကြိမ် သူစိမ်းယောင်္ကျားတစ်ယောက်၏ လီးအား မြင်ဖူးသဖြင့် စိတ်ထဲ တရှိန်းရှိန်းလေး ဖြစ်ကာ အကြည့်ကလည်း မခွာနိုင်တော့ပေ။ လင်ဖြစ်သူလီးထက် ထွားကြိုင်တုတ်ခိုင်သော ဇော်သူလီးကြီးမှာ နွယ်ဝတီအား ဖမ်းစားထား၏။ လီးကြီးမှာ အညိုရောင်သန်းကာ လမွှေးအုံပါးပါးလေးအောက်မှ ကြမ်းပြင်ပေါ် မပျောမမာ အနေထားဖြင့် ငိုက်ဆင်းနေသည်။ခါတိုင်း ဇော်သူပုဆိုးအတွင်းမှ ခပ်ရေးရေး အမြှောင်းလိုက်ကြီး ထနေသည်ကို မြင်မိသော်လည်း ဒီလောက်ကြီးလိမ့်မည်ဟု ထင်မထားခဲ့ပေ။လင်တော်မောင်ရဲခိုင်ပြသော ဖုန်းထဲမှ နီဂရိုးလူမဲကြီးများ၏ လီးကြီးများအား ပြေးမြင်မိပြန်၏။ဇော်သူလီးအားကြည့်ရင်း စောက်ပတ်လေးထဲမှ အရည်ကြည်များ စို့နေတော့သည်။
” မမဝတီ . ခုထိ ကလေး မယူသေးဘူးလား “ ” ဟမ် . ဘာမေးလိုက်တာလဲ “ လီးကြီးအား ဈာန်ဝင်နေချိန် ဇော်သူဆီမှ အသံထွက်လာသဖြင့် ကမန်းကတန်း လီးဆီမှ အကြည့်လွဲကာ ပြန်မေးလိုက်ရ၏။ ” ကလေး . မမွေးသေးဘူးလား မေးနေတာ . ဘာတွေးနေတာလဲဗျ “ ” ကလေး ယူချင်တာပေါ့ကွာ . မင်းဆရာက မယူချင်သေးတာ . မမကို . လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေဦးတဲ့ “ ” အော် . ကျနော်က . ဆရာက မရတာ ထင်နေတာ “ ” ကြံကြံဖန်ဖန်ကွာ . မင်းက ဘာလို့ အဲလို ထင်ရတာတုန်း “ ” ဟိုးတရက်က . ဆရာနဲ့ ဘီယာသောက်ရင်း . ဆရာက ဆေးလိပ် လျော့ရမယ်တဲ့ . ပန်းက သိပ်မမာဘူးပြောလို့ “ ” အာ . ဘာတွေလာပြောနေတာလဲ . ဇော်သူ “ ဇော်သူ့စကားကြောင့် နွယ်ဝတီမျက်နှာလေး ပန်းရောင်သန်းကာ ခေါင်းလေးငုံထားလိုက်သည်။ တကယ်လည်း ၁နှစ်ကျော်လောက်က စပြီး လင်ဖြစ်သူရဲခိုင်မှာ အချက်၂၀လောက် လိုးပြီးသည်နှင့် လီးက ပျော့ကျသွား၏။လီးကလည်း ပုံမှန်ဆိုဒ်သာသာမို့ ပျော့သွားသည်နှင့် ဒစ်ခေါင်းလေးသာ အထုတ်အသွင်း လုပ်ရတော့သည်။အားမရသဖြင့် စောက်ခေါင်းအတွင်းသားနှင့် ညှစ်မိလျင် ဒစ်ခေါင်းလေးမှာ အပြင်ပြုတ်ထွက် သွားရ၏။ဇော်သူက စကားပြောရင်း ပုဆိုးအောက်နားစအား ပေါင်ရင်းထိ ဆွဲတင်လိုက်သည်။
” အာကွာ . ဘာလုပ်တာလဲ “ ” ရှက်မနေပါနဲ့ . မမဝတီရယ် . ဒါတွေက အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး . ရော့ ကြည့်လေ “ ” အိုရ် . မပြပါနဲ့ . ဟို ဟို . ပြန်ဖုံးထားကွာ “ ” မမဝတီ . ခိုးကြည့်နေရတာ . ပင်ပန်းပါတယ် . အခန်းထဲလည်း ဘယ်သူမှ မရှိပါဘူး “ ” ဟင့်အင်းကွာ . ဖုံးထားလိုက် “ နွယ်ဝတီမှာ ပုဆိုးလှန်ပြနေသော ဇော်သူအား မျက်နှာလွဲကာ ပြန်ပြောနေပြန်သည်။ ထိုစဉ် ဇော်သူတစ်ယောက် ထိုင်လျက်အနေထားဖြင့် နွယ်ဝတီနားတိုးကပ်ကာ နွယ်ဝတီညာဘက်လက်အား ဆွဲယူကာ သူ့လီးပေါ်တင်ပေးလိုက်၏။ ” ဟင့်အင် “ နွယ်ဝတီမှာ လက်ဖဝါးထဲ နွေးကနဲ့ခံစားမှု့နှင့်အတူ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ တဖိန်းဖိန်း လေး ဖြစ်လာရသည်။သို့သော် အသိစိတ်မှ သူစိမ်းယောင်္ကျား၏ လီးမှန်း အသိပေးသည်နှင့် လီးအားတချက်ခိုးကြည့်ကာ သူမလက်လေးအား ပြန်ရုတ်လိုက်၏။သို့သော် ဇော်သူကလည်း ပြန်ယူကာ လီးပေါ်တင်ပေးရာ သူမကခွာလိုက် ဇော်သူကပြန်တင်လိုက်နှင့် ၅ကြိမ်မြှောက်တွင် ဇော်သူဆန္ဒအား လိုက်လျောကာ လီးကြီးအား ဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်တော့သည်။ထိုအခါ လွဲထားသော သူမမျက်နှာလေးအား ဇော်သူက ဆွဲလှည့်ရင်း နူတ်ခမ်းချင်းတေ့စုပ်ပစ်၏။ဇော်သူလျှာဖျားလေးအား ပြန်လည်ဖမ်းစုပ်ရင်း သူမလက်လေးမှာ အလိုလျောက် လီးအားပွတ်သပ်ပေးနေမိပြန်သည်။
လက်ထဲ အားရပါးရ ရှိလှသည်မို့ လီးအရည်ပြားအား စုလိုက်ဖြဲလိုက်နှင့် ဂွင်းထုပေးသလို ဖြစ်နေ၏။ဇော်သူ့လက်တဖက်ကလည်း သူမနို့အုံများအား ညှစ်ခြေရင်း အောက်ဖက်ရွေ့ကာ ထမိန်အပြင်ဘက်မှာ အဖုတ်လေးအားအုပ်ကိုင်ရင်း ဖိပွတ်ရာ ကာမစိတ်များ ထကြွလာတော့သည်။တခဏအတွင်း သိတ်ခါနှင့် စောင့်စည်းရမည့် စည်းများ မေ့လျောကာ ရမ္မက်စိတ်အား ဖွင့်လိုက်မိသည်။ကြမ်းပြင်ပေါ်လှဲချရာတွင် အပေါ်အင်္ကျီနှင့် ဘော်လီအား ဘယ်အချိန်မှ ချွတ်လိုက်မှန်း မသိလိုက်ရပေ။ထမိန်ဆွဲချွတ်ရာ ဖင်ကြီးကြွပေးရင်း ထပ်ရောက်လာမည့် ကာမ စည်းစိမ်များအား မျှော်လင့်မိပြန်၏။ပက်လက်အနေထားဖြစ်နေသော သူမကိုယ်လုံးအား ဇော်သူမှ ဖင်ပြန်ခေါင်းပြန်ခွကာ ပေါင်သားဖွေးဖွေးလေးအား အကွင်းလိုက်ရဲနေအောင် စုပ်တော့သည်။ နွယ်ဝတီမှာလည်း ပက်လက်အနေထားဖြင့် ညာဘက်သို့ခေါင်းလှည့်ကြည့်ရာ ဇော်သူ့ပေါင်ကြားမှ ၇လက်မကျော်ကျော်ရှိသော လီးကြီးမှာ ဒစ်ကြီးပြဲလန်ကာ လီးထိပ်အပေါက်မှ အရည်ကြည်လေး ဥနေပြီး ဆက်ကနဲ့ဆက်ကနဲ့ တုန်နေသည်ကို မြင်လိုက်ရ၏။အလိုလျောက် ဇော်သူ့ပေါင်ကြားဘက် မျက်နှာချင်းဆိုင်လှည့်ကာ သူမပေါင်သားလေးအား စုပ်နေသော ဇော်သူ့ခေါင်းအား ခွပစ်လိုက်သည်။
သူမမျက်နှာတည့်တည့်မှ လီးထိပ်အား လျှာဖျားလေးဖြင့်တို့ကြည့်ရာ လီးထိပ်အရည်ကြည်လေးအား ထိမိပြီး ညှီစို့စို့ ငံကျိကျိ အရသာလေး စတင်ခံစားမိ၏။ တချိန်တည်းလိုလိုပင် စောက်ပတ်လေးထဲ လျှာနွေးနွေးလေးက ထိကပ်လာသဖြင့် ခါးလေးဆက်ကနဲ့ တုန်သွားရသည်။စိတ်လှုပ်ရှားမှု့ကြောင့် တုန်ရင်နေသော လက်ကလေးက ဇော်သူလီးအရင်းအား ဆုပ်ကိုင်ရင်း ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ပေးကာ လီးထိပ်အား ဖမ်းငုံပစ်တော့သည်။ဇော်သူ့လီးကြီး အကြောပြိုင်းပြိုင်းထကာ သူမပါးစပ်ထဲ တင်းမာလာချိန် ဇော်သူကလည်း နွယ်ဝတီ စောက်ပတ်လေးအား ယက်လိုက်စုပ်လိုက်နှင့် လက်ချောင်းများက ထိုးစွကလိရင်း ဖင်ဝလေးပါ လျှာအပြားလိုက် ယက်ပေးနေ၏။နွယ်ဝတီတစ်ယောက် လီးစုပ်ရင်း သူမစောက်ပတ်လေးမှာ ဖေါင်းကြွလာပြီး စောက်ရည်များအိုင်ကျလာရာ ကြမ်းပြင်ပေါ် အကွက်လိုက်ကြီး ဖြစ်နေတော့သည်။
” အားး .. ရှီးးးး . ဇော်သူရယ် .. အမလေးးး “ လီးအားပါးစပ်မှ ထုတ်ကာ ဂွင်းထုပေးရင်း အသံထွက် ညည်းလိုက်ရ၏။ဇော်သူကလည်း နွယ်ဝတီ၏ ရမ္မက်သံလေးများကြောင့် စောက်ပတ်ယက်နေသည်ကို ရပ်ကာ ကုန်းထရင်း နွယ်ဝတီအား ပက်လက်လှန်ကာ ပေါင်ကြားထဲ နေရာယူနေသည်။ ထို့နောက် ပေါင်နှစ်ခြမ်းဖြဲကာ စောက်ခေါင်းပေါက်ထဲ လီးထိပ်ဖြင့် တေ့ပြီး ပက်လက်ဖြစ်နေသော နွယ်ဝတီကိုယ်လုံးပေါ် မှောက်ချပစ်၏။ခန္ဓာကိုယ်မှောက်ချသည်နှင့် ဇော်သူလီးကြီးမှာ စောက်ပတ်လေးထဲ တိုးဝင်လာရာ နွယ်ဝတီတစ်ယောက် ခေါင်းလေးမော့ကာ မျက်ရည်များလည်လာခဲ့သည်။လင်ဖြစ်သူရဲခိုင်လီးထက် ကြီးမားတုတ်ခိုင်သော ဇော်သူလီးကြီး ဝင်လာရာ အဖုတ်နူတ်ခမ်းသားလေး ပူကနဲ့ခံစားရပြီး စောက်ခေါင်းထဲ သပ်လျိူထားသလို ဖြစ်နေရှာ၏။
” အားး .. အမေ့ .. ဖြည်းဖြည်းလိုးနော် .. အဟင့် . ကြပ်လိုက်တာ . နာလည်းနာတယ် “ ” အင်းပါ .. မမဝတီရယ် . အစမို့လို့ပါ . ရှီးးးးးးး “ ဇော်သူမှာလည်း လီးဝင်ကတည်းက စီးစီးပိုင်ပိုင်လေးမို့ စောက်ပတ်လေးမှာ မကျယ်သေးကြောင်း ခံစားသိရှိလိုက်သည်။ထို့နောက် လီးအား ဖြည်းဖြည်းချင်းထုတ် ဖြည်းဖြည်းချင်းသွင်းကာ နွယ်ဝတီ ခံနိုင်ရုံလေး လိုးပေးလိုက်သည်။စတွေ့ကတည်းက လိုးချင်နေသော စောက်ပတ်လေးအား လိုးခွင့်ရပြီမို့ စိတ်ထဲ အားရကျေနပ်နေမိ၏။ပထမတချီတွင် နွယ်ဝတီစိတ်ကြိုက်ထိန်းလိုးကာ အထွဋ်ထိပ် ပို့ပေးလိုက်သည်။နွယ်ဝတီ၏ ပြီးသွားပုံလေးမှာ နဖူးကြောလေးကြုံ့ကာ အောက်နူတ်ခမ်းလေးအားကိုက်ရင်း သူ၏ကျောကုန်းအား ကုတ်ခြစ်ပြီးသွားသဖြင့် အမှန်တယ် ကာမအရသာအား ခံစားရင်း ပြီးမြှောက်သွားသည်ကို ရိပ်မိနေ၏။
” အ .. အားး … ထွက် ပြီ .. ရှီးး အမလေးးးး … ကောင်းလိုက်တာ . ဇော်သူရယ် “ နွယ်ဝတီတစ်ယောက် ပက်လက်အနေထားဖြင့် ဇော်သူ့လီးကြီးအား အောက်ကနေပင့်ကပ်ကာ စောက်ရည်များ ပန်းထုတ်ရင်း ခဏအကြာမှ ငြိမ်သက်သွားတော့သည်။ဇော်သူမှာ လီးအားမချွတ်ပဲ စိမ်ထားရင်း နွယ်ဝတီ၏ လည်တိုင်ဖွေးဖွေးလေးအ လျှာအပြားလိုက်ပင့်ယက်ကာ ဆွဲစုပ်ပေးနေပြန်၏။ မိနစ်၂၀ခန့်နားပြီး နွယ်ဝတီနားရွတ်ဖျားလေးအား စုပ်ရင်း ဇော်သူက ခပ်တိုးတိုး ပြောလိုက်သည်။ပြောပြီးသည်နှင့် နွယ်ဝတီစောက်ဖုတ်ထဲမှ လီးအားဆွဲထုတ်ကာ ဒူးထောက်ထိုင်ချပစ်၏။ဇော်သူ့လီးကြီး ကျွတ်ထွက်သည်နှင့် နွယ်ဝတီမှာ ချက်ချင်း လေးဖက်ထောက်ကုန်ပေးနေ၏။ ဇော်သူကလည်း ရှေ့ကိုယ်လုံးလေး ကြမ်းပြင်ကပ်ကာ ဖင်သားစိုင်ကြီးအား ကော့ပေးထားသော နွယ်ဝတီနောက်မှ နေရာယူကာ ပူပူနွေးနွေးလိုးထားသဖြင့် အနည်းငယ်ယောင်နေသော စောက်ပတ်လေးအား ဒုတိယအကြိမ်ဖြဲယက်ပေးလိုက်ပြန်သည်။အဖုတ်လေးအားယက်ပေးရင်း ဖင်ဝအား လျှာထိပ်လေးစုချွန်ထိုးသွင်းရာ နွယ်ဝတီ၏ ကျသွားသော ကာမမီးစလေးက ပြန်လည်တောက်လောင်လာ၏။သို့သော် သူမစိတ်ထဲ တစုံတခုတွေးမိကာ ကြက်သိမ်းမွှေးလေးများ ဖျင်းကနဲ့ ထလာရသည်။
” ဇော်သူ “ ” ပြောလေ . မမဝတီ “ ” ဟို ဟို .. ဖင် တော့ . မလိုးရဘူးနော် “ ” အင်းပါ . မမဝတီ .. စိတ်မပါရင် . မလုပ်ပါဘူး “ ” မင်းဟာက . မောင့်လီးထက် ကြီးပြီးရှည်တယ်ကွာ . နောက်ကျမှ .. ဖြည်းဖြည်းချင်း လိုးပေါ့ . ခုတောင် မမစောက်ဖုတ်လေး .. ကျိန်းနေလို့ “ ” ဟုတ် . စောက်ပတ်ပဲ . အားရအောင် လိုးမှာပါ မမ .. စိတ်မပူနဲ့ “ စကားဆုံးသည်နှင့် ဇော်သူတစ်ယောက် နွယ်ဝတီ၏ ဖင်ကြီးအား ပွတ်ကာ ဒူးထောက် ခါးဆန့်ရင်း နောက်မှ ပစ်လိုးတော့သည်။တချီပြီးထားပြီမို့ နွယ်ဝတီမှာ ဇော်သူ၏ လိုးချက်များအား ခံနိုင်လာ၏။ တချက်တချက် ဇော်သူလီးထိပ်မှ သားအိမ်ဝလာဆောင့်လျင် စောက်ပတ်အုံလေး ကျင်သွားသည်မှ အပ လီးအရသာ အပြည့်ခံစားနေရ၏။ဇော်သူကလည်း ခံနိုင်လာသော နွယ်ဝတီ၏ အမူယာအားကြည့်ကာ ခါးလေးအား စုံကိုင်ပြီး မနားတမ်း ပစ်ပစ်လိုးပစ်တော့သည်။
” ဗျစ် .. အမေ့.. ဘွတ်ဘွတ် . အ .. ဖွပ် ဗျစ် .. အ အားးး .. ကောင်းတယ်ကွာ .. မမ ဒါမျိုး တခါမှ မခံစားဖူးဘူး .. အမလေးး .. အ အ .. လိုးလိုး .. မညှာနဲ့ .. ဘွတ် ဗျစ် .. မင်းစိတ်ကြိုက် အားကုန်လိုးစမ်း . အင်းဟင်း “ နွယ်ဝတီတစ်ယောက် လင်ဖြစ်သူဆီက မရဖူးသော လီးအရသာအား ရရှိနေကာ ဇော်သူ၏ ထိထိမိမိ လိုးချက်များအား ကျေနပ်အားရစွာ ခံယူရင်း ညည်းတွားနေ၏။ဇော်သူကလည်း စိတ်ကြိုက်လိုးခွင့်ရသည်နှင့် မီးပွင့်မတတ် အားမနာတမ်းပစ်လိုးတော့သည်။ဆောင့်လိုးလိုက်တိုင်း တုန်ခါနေသော နွယ်ဝတီ၏ ဖင်သားစိုင်ကြီးမှာလည်း ဇော်သူအား ထပ်ခါထပ်ခါ ပစ်လိုးရန် ဖိအားပေးနေသလို ဖြစ်နေ၏ ။ဇော်သူ၏ ဆောင့်ချက်များ ပြင်းထန်လာကာ တဇွိဇွိ တဘွတ်ဘွတ်ဖြင့် လီးထိပ်က သားအိမ်ဝ တဒိုင်းဒိုင်းထိကပ်ကာ နွယ်ဝတီတစ်ယောက် စောက်ပတ်တအုံလုံး ကျင်လာပြီး ရင်ခေါင်းများအောင့်ကာ စောက်ရည်များ ထောင်ပန်းပစ်တော့သည်။
” အမလေးးး .. အ အားးးး .. မ ရ တော့ ဘူး ကွာ .. ရှီးးးးးးးး အ အ .. ထွက် ပြန်ပြီကွာ .. အားးး အားးး အားးးးးး “ နွယ်ဝတီတစ်ယောက် ကြမ်းပြင်အား လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် တဖုန်းဖုန်း ထုကာ အားကနဲ့ ညည်းသံရှည်ကြီး ဆွဲရင်း ဒုတိယ အကြိမ် အထွဋ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိသွားပြန်၏။ဇော်သူမှာလည်း နောက်မှ ဒူးထောက်ကာ နွယ်ဝတီဖင်ကြီးအား တဖြန်းဖြန်းရိုက်ရင်း စိတ်ကြိုက်ဆောင့်လိုးရသဖြင့် စောက်ရည်များကြောင့် လီးအရည်ပြားနွေးလာသည်နှင့် မေးကြောများထောင်လာအောင် အဆက်မပြတ်လိုးရင်း လရည်များ ပန်းထည့်ပေးလိုက်တော့သည်။ ” ဝှီးးး . ဘတ် “ နွယ်ဝတီတစ်ယောက် အတွေးလွန်နေစဉ် ဘေးမှ အိပ်ပျော်နေသော လင်ဖြစ်သူရဲခိုင်က လာခွသဖြင့် အတွေးစပြတ်ကာ သတိပြန်ကပ်လာရ၏။ပေါင်ကြားထဲစမ်းကြည့်ရာ စောက်ရည်များ ရွှဲနေသဖြင့် ညဝတ်စကပ်အပါးလေးနှင့် စောက်ရည်များသုတ်ကာ ကြိတ်မိတ် အိပ်ပစ်လိုက်တော့သည်။ခေါင်းရင်းဘက် ပြတင်းပေါက်မှ ကျေးငှက်သံလေးများနှင့်အတူ ပါးပြင်လေးအား ဝင်သက်ထွက်သက်ငွေ့ငွေ့လေးနဲ့ အသားစိုင်တခု လာရောက်ထိကပ်သဖြင့် မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်မိလိုက်၏။ ” ဝတီ “ ” မောင် “ ” နိုးရင်ထတော့ “ ” ဟင့်အင် . ဒီနားတိုး “ ရဲခိုင် မျက်နှာအနံ့ပြန်နမ်းပြီးမှ လွတ်ပေးလိုက်သည်။
” ထတော့ . အချွဲလေးရဲ့ . လင်းထိန်နေပြီ “ ” အင်းပါဆို “ ပြောရင်း တခြားဘက် လှည့်ကာ ဒူးကွေးထားသော နွယ်ဝတီ၏ ဖင်ကြားထဲ ရဲခိုင်တစ်ယောက် လက်နှင့် ထိုးကလိပစ်၏။ ” အယ့် . ယားတယ် မောင်ရဲ့ “ ” ထပါဆို . မနက်စာ လုပ်တော့ . မောင် ဒီနေ့ . ပရောဂျက် အသစ်တခုအတွက် ခရီးထွက်ရမှာ . ညအိပ်ဖြစ်ရင် . ဇော်သူ့ ဒီစောင့်အိပ် ခိုင်းလိုက်မယ် “ ” အော် . ရပါတယ် မောင်ရယ် . ရပ်ကွက်က သန့်ပါတယ် . ဝတီတစ်ယောက်ထဲလည်း အိပ်ရဲပါတယ် “ ” ယောင်္ကျားလေး အဖေါ်တစ်ယောက်ရှိတော့ ဝတီ အတွက် . စိတ်ချရတာပေါ့ “ ” ဟုတ်ပါပြီရှင် . မောင့် သဘောပါနော် “ ခဏအကြာ ရဲခိုင်မှာ နွယ်ဝတီပြင်ပေးသော မနက်စာ စားသောက်ပြီးသည်နှင့် အိပ်ခန်းထဲတွင် အဝတ်စား ၂စုံ ၃စုံထည့်ကာ အလုပ်နှင့်ပတ်သက်သော စာရွတ်စာတမ်းများ သေချာစစ်နေ၏။
” တူတူ . တူတူ . တူ “ ” ဟဲလို . ရဲခိုင် စကားပြောနေပါတယ် “ စာချုပ်စာတမ်းများ စစ်နေစဉ် ဖုန်းသံမြည်လာသဖြင့် ဖုန်းယူဖွင့်လိုက်သည်။ ” ကိုရဲလား . အဝတ်စား အပိုထည့်ခဲ့လိုက်ဦး . ဟိုမှာ မြေကွက်ပိုင်ရှင်က . စရံစာချုပ် ချုပ်ဖြစ်ရင် နက်ဖန် တရက်လောက် နေရမယ်ဗျ “ ” ထည့်ပြီးပါပြီ . ဦးစိုးထွန်းရာ . ခင်ဗျားတို့သာ မမေ့နဲ့ . ဟိုရောက်မှ ဟိုစာရွတ်မေ့ ဒီစာရွတ်မေ့နဲ့ “ ” ဟဲဟဲ . အဲဒါတွေကြောင့်မို့ ကိုရဲကို အားကိုးနေတာပေါ့ဗျာ . ခဏနေ့ ကားလွတ်လိုက်မယ် ခင်ဗျားကား မယူနဲ့တော့ “ ” ကောင်းပါပြီဗျာ . အားလုံးအဆင်သင့်ပါ “ ရှယ်ယာရှင် ပါတနာ ဦးစိုးထွန်းနဲ့ စကားပြောအပြီး ပိုင်စိုးလည်း စာရွတ်စာတမ်းများ သေချာစစ်ကာ အိပ်ထဲထည့်လိုက်တော့၏။ဧည့်ခန်းတွင်း ထိုင်နေချိန် ခဏအကြာ လာခေါ်သော ကားလေးရောက်ရှိလာသဖြင့် မိန်းမဖြစ်သူ ပါးပြင်အား တချက်နမ်းကာ နူတ်ဆက်ထွက်လာခဲ့သည်။
” ရွတ် . လာခေါ်နေပြီ . မောင်သွားပြီနော် “ ” တာ့တာ . မောင် . လမ်းဂရုစိုက် “ နွယ်ဝတီလည်း ခင်ပွန်းသည်ထွက်သွားသည်နှင့် မီးဖိုခန်းထဲ ထမင်းဟင်းချက်ရန် ဝင်လာခဲ့၏။ ” တီတီ . တီတီ “ အိမ်ရှေ့မှ ကားဟွန်းသံကြောင့် နွယ်ဝတီတစ်ယောက် ထွက်ကြည့်လိုက်သည်။ကားလေးမြင်သည်နှင့် မျက်လုံးများ အရောင်တောက်လာကာ ခြံတံခါးသွားဖွင့်ပေး၏။ကားလေးမှာ ခြံဝင်းထဲ မောင်းဝင်လာကာ တိုက်၏ ဘယ်ဘက်ဘေး ကားဂိုဒေါင်နား ရပ်တန့်သွားတော့သည်။ နွယ်ဝတီမှာ ခြံဝင်းတံခါး ပြန်စိကာ တိုက်ထဲပြန်ဝင်လာချိန် ကားပေါ်မှ ဆင်းလာသော ဇော်သူ့ဘေးမှ ခပ်ချောချော မိန်းမငယ်လေးကြောင့် မျက်နှာကွက်ကနဲ့ ပျက်သွားမိ၏။သို့သော် ပျက်သွားသောမျက်နှာအား ချက်ချင်း ပြန်ပြင်ကာ အပြုံးတခု ပြောင်းလဲပစ်လိုက်သည်။
” အံမယ် . ငါ့မောင်က . လာကြွားတာပေါ့ “ ” မဟုတ်ပါဘူး . မမဝတီရယ် . ဒီနေ့ ဇင်လေးနဲ့ လျှောက်လည်မလို့ ခွင့်ယူတော့ ကိုရဲခိုင်က နယ်ဘက် ခရီးထွက်မှာမို့ . ဒီလာနေခိုင်းလိုက်တာ “ ” အော် . ဒါများကွား . ကိုယ့်ပါသာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လျှောက်လည်ပါ . မမ နေတတ်ပါတယ် “ ” အင်း . ဒီမှာ ထမင်းစားပြီး . နေ့လည် ရေကူးကန် သွားမှာ . မမဝတီ “ ” ဟုတ်ပါပြီ . ဧည့်သည် ပါလာတော့ ထမင်း ပိုချက်လိုက်ပါ့မယ်ရှင် “ စကားပြောရင်း ဧည့်ခန်းထဲ ရောက်လာကာ ၃ယောက်သား ခုံပေါ် ထိုင်လိုက်ကြသည်။ဇော်သူနှင့် သူ့ကောင်မလေးမှာ နွယ်ဝတီ၏ မျက်နှာချင်းဆိုင် ခုံပေါ်တွင် အတူထိုင်နေ၏။ ” မမဝတီ . ဒါက ကျနော့်ချစ်သူ . ဇင်မာလှိုင် . ကျနော်က ဇင်လေးလို့ ခေါ်တယ် “ ” တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ် . ညီမ “ ” ဟုတ် မမ “ ဇော်သူက သူ့ချစ်သူနှင့် မိတ်ဆက်ပေးရာ နွယ်ဝတီမှာ အပြုံးမပြတ် ပြန်လည် နူတ်ဆက်လိုက်သည်။
” ဇင်လေး . ဒါက . ကိုကို့ ဆရာရဲ့ . အမျိုးသမီး . နွယ်ဝတီ တဲ့ . ကိုကိုက . မမဝတီ လို့ ခေါ်တာ “ ” မမက . အရမ်းလှတယ်နော် ကိုကို “ ” မယ့်လေး . မြှောက်နေပြန်ပြီ . ထမင်း ရှယ်ကျွေးမှာပါနော် ငါးရံ့ခြောက်ချက် နဲ့ ဆူးပုတ်ကြီးဟင်းရည် သရက်ချဉ်လေးရော သုပ်ကျွေးမယ် ခ်ခ် ခ်ခ် “ ဇင်မာလှိုင်မှ ဇော်သူ့အား နွယ်ဝတီလှကြောင်း ပြောရာ နွယ်ဝတီရင်ထဲ အားရကျေနပ်ကာ ပြန်လည်ပြောဆိုနေတော့သည်။ဇင်မာလှိုင်မှာ ပါတိတ်အစိမ်း ဝမ်းဆက်လေးနှင့် ဆံနွယ်များက ကျောလယ်သို့ ဖြန့်ချထားရင်း မျက်နှာသွယ်သွယ်လေးမှာ မျက်မှန်ကိုင်းအနက်လေး တပ်ဆင်ထား၏။ ဇင်မာလှိုင်၏ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်မာ သူ့နေရာနှင့်သူ ကြည့်ကောင်းပေမယ့် နွယ်ဝတီ၏ စူဖြိူးသော ရင်သားများ ခွက်နေသော ခါးလေးအောက်မှ ကော့တက်နေသော ဖင်သားစိုင်နှစ်ခုအား မယှဉ်နိုင်ပေ။ ထို့ပြင် နွယ်ဝတီ၏ အသက်ထက်နုပျိုနေသော မျက်နှာချောချောပေါ်မှ မျက်ခုံးထူထူကြီးနှစ်ဖက် နှာတံစင်းစင်းလေးနှင့် နူတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးမှာ မိန်းမချင်းပင် ငေးယူရသည်။
” မမက . တကယ်ကို လှတာပါ . ဇင်လေးတို့ မိန်းမချင်း ငေးယူရတယ် . အိမ်ထောင်သည်ဆို ယုံကြမယ် မထင်ဘူး “ ” ခ်ခ် . ကဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ်သာ နေကြနော် . မမ ထမင်းဟင်း ချက်လိုက်ဦးမယ် “ ပြောပြီးသည်နှင့် နွယ်ဝတီတစ်ယောက် ဇော်သူ့အား တချက်စိုက်ကြည့်ကာ မီးဖိုခန်းဘက် လျှောက်လာခဲ့၏။ ” ဟမ့် . ကိုကို . မျက်လုံးကြီး ကျွတ်ပါသွားဦးမယ် . ခ်ခ် “ ” မပါပါဘူး . ဒီမှာ ဇင်လေး တစ်ယောက်လုံး ရှိနေတာကို “ ဇော်သူမှာ ဧည့်ခန်းတွင်းမှ မီးဖိုခန်းဘက် ထွက်သွားသော နွယ်ဝတီ၏ ဖင်ကြီးအား ငေးကြည့်နေသဖြင့် ဇင်မာလှိုင်က လှမ်းပြောနေသည်။ ” ဟင် . ဧည့်ခန်းထဲမှာ ဇင်လေးရှိတယ်လေကွာ “ ” အေးဆေးပါ . မမဝတီကလည်း . ဇတ်ကားဖွင့်ကြည့်ပြီး ဇတ်ကားထဲ စိတ်ဝင်စားနေတာပါ “ မီးဖိုခန်းထဲ ဟင်းချက်နေသော နွယ်ဝတီ၏ ညဝတ်ဒူးဖုံးဂါဝန်လေးမှာ ခါးထိလန်တက်နေပြီး သူမနောက်ကျောမှ ဇော်သူက ဒူးထောက်လျက်အနေထားဖြင့် ဖင်သားစိုင်နှစ်ဖက်အား ယက်ကာ သွားလေးဖြင့် ဖိကိုက်ပေးနေသည်။
” အာ . ခဏနေဦးကွာ “ နွယ်ဝတီမှာ ဂါဝန်လေးအား အောက်ပြန်ဆွဲချရင်း မီးဖိုခန်း တံခါးဝမှ ဧည့်ခန်းဘက် ခိုးကြည့်လိုက်၏။ဇင်မာလှိုင်မှာ ဇော်သူပြောသည့်အတိုင်း ဧည့်ခန်းတွင်းမှ နံရံကပ်ထားသော ဖလက်တီဗွီအား ဖွင့်ကာ ချန်နယ်များမှ လွင့်သော ဇတ်ကားများအား တခုပြီးတခု ပြောင်းကြည့်နေသည်ကို မြင်နေရသည်။အတွင်းဘက်ပြန်လျှောက်လာရင်း ပန်းကန်များတင်သော စင်နှင့် ရေခဲသေတ္တာ ကြားထဲ နံရံကျောကပ်ထားလိုက်၏။ လူနှစ်ယောက်စာ နေရာအလွတ်လေးမို့ မီးဖိုခန်းတံခါး ဖွင့်ဝင်လာလျင် ပန်းကန်စင်ဖြင့် ကွယ်နေ၍ ချက်ချင်း မမြင်နိုင်ပေ။ တဖက်ကလည်း ရေခဲသေတ္တာရှိနေသဖြင့် လူဝင်လာသည်နှင့် ရေခဲသေတ္တာဖွင့်ကာ ရေဘူးယူသလို ဟန်ဆောင်လို့ရ၏။ရဲခိုင်အား လာအကြိုအပို့လုပ်ရင်း ရဲခိုင်ရေးချိုးနေစဉ် နွယ်ဝတီနှင့်ဇော်သူတို့ ရသလောက် အာသာဖြည်သော နေရာလေးဖြစ်သည်။ခုလည်း နွယ်ဝတီတစ်ယောက် နံရံကျောကပ်လိုက်သည်နှင့် ဇော်သူမှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်အနေထားဖြင့် တိုးကပ်လာရင်း မတ်တပ်ရပ်လျက် နွယ်ဝတီ လည်တိုင်လေးအား ဆွဲစုပ်နေ၏။
” ဇော်သူ တအားမစုပ်နဲ့နော် . အရာတွေ ဇင်လေးရှေ့ကျ မကောင်းဘူး “ ” အင်းပါ . မမဝတီရယ် “ နွယ်ဝတီစကားကြောင့် ဇော်သူမှာ လည်တိုင်လေးအား မစုက်တော့ပဲ လျှာဖြင့် ပင့်ယက်ကာ နားရွတ်ဖျားလေးအား စုပ်ယူလိုက်တော့သည်။နွယ်ဝတီမှာလည်း ဇော်သူ၏ စွဲမက်ဖွယ် အနမ်းများကြား မျက်လုံးလေး စင်းကာ ဇော်သူ့ခါးအား ပြန်ဖက်ထား၏။တဖြည်းဖြည်း ဇော်သူ့အနမ်းများမှာ အောက်ရွေ့လာစဉ် ညဝတ်အင်္ကျီလေးအား လည်ပင်းထိပင့်တင်ပေးလိုက်သည်။ဘော်လီချိတ်ဖြုတ်ကာ နို့အုံထိပ်မှ နို့သီးခေါင်းလေးအား ဇော်သူ့ပါးစပ်နား တေ့ပေးလိုက်ပြန်၏။ဇော်သူတစ်ယောက် နို့သီးခေါင်းလေးနှစ်ခုအား တဖက်ပြီးတဖက် အလှည့်ကျစို့ရင်း နွယ်ဝတီရှေ့တည့်တည့် ဒူးထောက်ထိုင်ပစ်သည်။ နွယ်ဝတီတစ်ယောက် သူမပေါင်ကြားရှေ့ မော့ကြည့်နေသော ဇော်သူ့ခေါင်းလေးအား လက်တဖက်ဖြင့် ဆွဲကိုင်ကာ လွတ်နေသောကျန်လက်တဖက်က ညဝတ်ဒူးဖုံးဂါဝန်အား အောက်နားစမှဆွဲလှန်ရင်း ပေါင်ဂွတည့်တည့် ဇော်သူမျက်နာအား ဆွဲကပ်ပေးလိုက်တော့၏။
” အ .. အအ .. ရှီးးးးးးးး “ စောက်ဖုတ်အက်ကွဲကြောင်းလေးထဲ လျှာနွေးနွေးလေး တိုးဝင်လာကာ အစိလေးအား ဆွဲစုပ်နေသဖြင့် နွယ်ဝတီတစ်ယောက် ပတ်ဝန်းကျင်အား မေ့ကာ အသံထွက်ညည်းတွားနေသည်။ ခဏအကြာတွင် စောက်ပတ်တအုံလုံး အရည်များရွှဲလာကာ ဇော်သူမှ သူမအား ကိုယ်တပတ်လှည့်ခိုင်းကာ နံရံလက်ထောက်ခိုင်းနေ၏။ဒီအနေထားက နွယ်ဝတီ အကြိုက်ပင် ဖြစ်သည်။နံရံအား လက်ထောက်ကာ ခါးလေးခွက်ရင်း ဖင်ကြီးအား ကော့ပေးထားလိုက်၏။ ” အားဟား . ကောင်းလိုက်တာကွာ . အင်းဟင်း . ဟုတ်တယ် . အဲဒီနားလေး “ သူမမျှော်လင့်သည်အတိုင်း ဇော်သူမှာ ဒူးထောက်လျက်အနေထားနှင့်ပင် သူမဖင်ကြီးနောက်မှ ဖင်ဝလေးအား လျှာဖြင့် ထောက်ကာ စောက်ခေါင်းပေါက်ထဲ လက်ချောင်းလေးသွင်းကာ ထိုးကလိပေးနေသည်။ဖင်ပေါက်လေးအား လျှာဖြင့်အယက်ခံရင်း စောက်ခေါင်းပေါက်ထဲ လက်ဖြင့်မွှေခံရစဉ် လူတကိုယ်လုံး လေဟာနယ်ထဲ မျောနေသလို ခံစားနေရ၏။ဖင်ပေါက်ထဲ လျှာထိပ်လေး ဝင်လာလိုက် ပြန်ထွက်သွားလိုက် နှင့် ကာမအရသာလေး ခံသားနေစဉ် သူမနောက်ကျောမှ ဒူးထောက်ထားသော ဇော်သူက ထရပ်လိုက်တော့သည်။
” ဗျစ် . အ .. ဗျစ် ဘွတ် .. အအ “ ခါးလေးအား ကိုင်ကာ စောက်ခေါင်းပေါက်ထဲ လီးထိပ်ဖြင့်တေ့ရင်း ဖိလိုးနေသည်။မကြာခင် သူမစိတ်တိုင်းကျ ထိထိမိမိဆောင့်ချက်များနှင့် ဇော်သူ့လိုးချက်များအား ပြန်လည်တုံ့ပြန်ပေး၏။ဇော်သူလီး အရင်းထိဖိကပ်လာသည်နှင့် ဖင်ကြီးအား ဝိုင်းကာ နှဲ့နှဲ့ပေးလိုက်သည်။ဇော်သူတစ်ယောက် ဆောင့်လိုးနေရာမှ နွယ်ဝတီ၏ တုံ့ပြန်သော ဖင်ကြီးကြောင့် ဆောင့်ချက်လျော့ကာ ခါးဆွဲပြီး လီးအား အဆုံးထိကပ်ထားပစ်၏။နွယ်ဝတီမှာ စောက်ခေါင်းတွင်း ဇော်သူ့လီးအား ညှစ်ဆွဲကာ လိုသလို ကစားရင်း စောက်ရည်များ ပန်းထွက်လာရသည်။ ဇော်သူကလည်း လီးတန်တစ်လျှောက် နွေးကနဲ့ ခံစားရသည်နှင့် လီးအားဆွဲချွတ်ကာ အမြန်ဒူးပြန်ထောက်လိုက်၏။ထို့နောက် စောက်ရည်များပန်းနေသော နွယ်ဝတီ စောက်ခေါင်းပေါက်အား ပါးစပ်ဖြင့်တေ့ကာ စုပ်ယူနေသည်။ နွယ်ဝတီမှာ ဘယ်ဘက်လက်အား နောက်ပြန်ဆန့်ထုတ်ကာ ဇော်သူခေါင်းအား သူမဖင်ကြားဆွဲကပ်ရင်း ညာဘက်လက်က နံရံအား အားပြုလက်ထောက်ထားတော့၏။စောက်ရည်များ ကုန်စင်သည်အထိ ဇော်သူခေါင်းအား ဖင်ကြားထဲ နောက်ပြန်ဆွဲကပ်ထားရာ ဇော်သူကလည်း စောင်ခေါင်းအားတေ့စုပ်ပြီးသည်နှင့် စောက်ပတ်တအုံလုံး ယက်ကာ ဖင်ပေါက်ပါ ပြောင်စင်အောင် ယက်ပေးပစ်သည်။
” အ အားးး .. ရ ရ ရပြီ ကွာ .. အားဟား ရှီးးးး “ ပြောပြီးသည်နှင့် ဇော်သူ့ခေါင်းအားလွတ်ကာ ခန္ဓကိုယ်တပတ်လှည့်ပြီး ဇော်သူရှေ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်ချလိုက်၏။နွယ်ဝတီ ထိုင်ချသည်နှင့် ဇော်သူမှာ ထရပ်နေသည်။ဇော်သူထရပ်လိုက်သည်နှင့် ပေါင်ကြားမှ စောက်ရည်များနှင့်ပြောင်လက်နေသော လီးကြီးမှာ နွယ်ဝတီ မျက်နှာရှေ့ ဝဲနေတော့၏။ ” အု . ဝု ဖလု . ပလောက် ပလောက် . ဖလု “ မျက်လုံးလေးမိတ်ကာ ဟပေးထားသော နွယ်ဝတီ၏ နူတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးထဲ ဇော်သူ့လီးကြီး ဝင်ရောက်လာသည်။ထို့နောက် ဇော်သူကလည်း နွယ်ဝတီ၏ ခေါင်းအား လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ထိန်းကာ ပါးစပ်အား ဖိလိုးတော့သည်။နွယ်ဝတီတစ်ယောက် နဖူးကြောများထောင်လာကာ မျက်လုံးများ ပြူးလာရင်း ပါးစပ်အားအလိုးခံနေရ၏။ဇော်သူမှာ လီးထိပ်ဖြင့် အာခေါင်ထိုးမိချိန် ပျို့တက်လာသော နွယ်ဝတီအား အနားယူခွင့်မပေးတော့ပေ လည်ချောင်းထဲ လရည်များပန်းထွက်လာသည်အထိ ဆွဲလိုးပစ်သည်။နွယ်ဝတီတစ်ယောက် ပါးစပ်ထဲ ဝင်လာသော လရည်များအား တဂွတ်ဂွတ်မျိုချရင်း ဇော်သူ့လီးကြီး ပြန်ထုတ်သွားမှ အနားယူနေရ၏။ ဇော်သူမှာ လီးအားထုတ်ပြီးသည်နှင့် ဒူးထောက်ပြန်ထိုင်ကာ နွယ်ဝတီ၏ နူတ်ခမ်းထောင့်မှ လျှံကျနေသော သူ့၏လရည်များအား လျှာဖြင့် သိမ်းယူကာ နွယ်ဝတီပါးစပ်ထဲ ထိုးထဲ့ပေးနေသည်။
နွယ်ဝတီကလည်း ဇော်သူလျှာပေါ်မှ လရည်များအား စုပ်ရင်း နူတ်ခမ်းချင်း တေ့နမ်းပြီးမှ လူချင်းခွာလိုက်၏။ဇော်သူမှာ နွယ်ဝတီ၏ ပါးပြင်အား တချက်နမ်းကာ မီးဖိုခန်းမှ ထွက်ခဲ့လိုက်တော့သည်။နေ့လည်ခင်း နေ့လည်စာ စားသောက်ပြီးချိန် ဇော်သူမှ ဇင်မာလှိုင့်အား အပြင်လျှောက့်ပို့ပြီးမှ ညပိုင်းမှ ပြန်လာမည်ဟု ပြောကာ ထွက်သွားကြ၏။ ဇင်မာလှိုင်၏ မျက်နှာလေး တင်းမာနေသည်ကို နွယ်ဝတီ တစ်ယောက်ရိပ်မိနေသည် ဘာအကြောင်းကြောင်းများ မျက်နှာတင်းနေသည်ကို စဉ်းစားမရသေးပေ။ညနေပိုင်း ဇော်သူ့ဆီမှ ဖုန်းလာမှ အဖြေက ရှင်းသွားတော့၏။
” တူတူ . တူတူတူ “ ” မမဝတီလား . ကျနော် ပြန်လာနေပြီ ဘီယာနဲ့ဝိုင် ဝယ်လာတယ် . ထမင်း မစားသေးနဲ့ဦး “ ” အင်းပါ . ဒါနဲ့ နေ့လည်က . ဇင်လေး ဘာဖြစ်တာလည်း “ ” အဲဒါ . မီးဖိုခန်းမှာ . မမဝတီနဲ့ လိုးပြီးတော့ . သန့်စင်ခန်းမှာ လီးကိုပဲ ရေဆေးလိုက်တာ . မျက်နှာကျ မေ့နေတာဗျို့ . ဧည့်ခန်းထဲ ပြန်ရောက်တော့ ကျနော့်ပါးစပ်ကို နမ်းရင်း စောက်ရည်နံ့ရော လရည်နံ့ရော ရတော့ . မျက်နှာတင်းသွားတာပါ “ ” ဟောတော် . ပြက်သနာ တက်သေးလား “ ” ထားလိုက်ပါ . ပိုင်ပါတယ်ဗျ . နောက်ဆို မမဝတီရော ဇင်လေးကိုရော . နှစ်ယောက်လုံး တပြိုင်ထဲ လိုးမှာ စောင့်ကြည့်လိုက် “ ဇော်သူပြန်ရောက်လာချိန် စားသောက်ပြီး တညလုံး လိုးခဲ့ကြပေမယ့် အဲဒီနေက နွယ်ဝတီနဲ့ ဇော်သူတို့ရဲ့ နောက်ဆုံးည ဖြစ်သွားခဲ့ရသည်။မနက်လင်းသည်နှင့် ဇော်သူတစ်ယောက် နွယ်ဝတီတို့အိမ်မှ ပြန်ရာ လမ်းတွင် ကားကားချင်း အက်ဆီးဒင့်ဖြစ်ကာ ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသွားခဲ့၏။နွယ်ဝတီတစ်ယောက် ခုချိန်ထိ ခင်ပွန်းသည် ခရီးထွက်လျင် ဇော်သူ့အား သတိရလျက်ရှိသည်..ပြီးပါပြီ